Esi Nyochaa YouTube Video ma ọ bụ Abụ
Kedu ka ị si echekwa fim vidio YouTube?
YouTube.com na-eji Adobe Flash na H.264 gụgharia video usoro. N'ụzọ dị mwute, usoro mgbasa ozi YouTube ndị a, dị ka telivishọn na-agbasa mgbe niile, ọ bụghị kpọmkwem iji chebe ya site n'aka onye na-ekiri ya. Iji chekwaa fim YouTube, ịkwesịrị iji ngwaọrụ ma ọ bụ ọrụ dị icheiche pụrụ iche, dịka a na-eji ihe ndekọ vidiyo iji chekwaa ihe ngosi telivishọn.
Ebe nrụọrụ weebụ dị iche iche na-enye ọrụ ọrụ nchekwa vidiyo iji budata fim YouTube maka gị. Ọ bụ ezie na ụfọdụ n'ime saịtị ndị a na-echekwa vidiyo enweghị ntụkwasị obi, enwere saịtị abụọ dịka ndị a pụrụ ịtụkwasị obi.
Olee otú ndị a si echekwa saịtị vidio YouTube Ọrụ:
Iji chekwaa vidio YouTube, ịkwesịrị ịdepụta URL YouTube ahụ ma kpaa ya na ebe nrụọrụ weebụ ọrụ nzọpụta. A obere ihe omume a na-akpọ 'Java ngwa' ga-amalite, nke ga-mgbe ahụ tọghata YouTube Flash nkiri gị. Ị ga-enwerịrị nhọrọ n'etiti ụdị FLV na MP4 usoro. Họrọ usoro, wee nwee ike ichekwa faịlụ ahụ na draịvụ ike gị. Usoro ngbanwe a ga-eme na kọmputa ụfọdụ buru ibu na California, ebe a na-echekwa akwụkwọ ikpeazụ ahụ na draịvụ ike gị.
Fọf FLV ma ọ bụ MP4 faịlụ ga-abụ ọkarị / obere ala dị mma karịa nke YouTube, ma ọbụlagodi ị ga-enwe ike ile vidiyo ahụ n'enweghị njikọ na YouTube.com.
Kedu ihe bụ 'Flash'? Nke ahụ ọ bụ 'Adobe Flash'?
Na-arụ ọrụ na "Ebe M Ntọala" na Ebe Microsoft
Internet 101: Nmalite Ntuziaka Ntugharị Ntuzi
Gbanyụọ mgbasa ozi SSID iji zoo Wi-Fi Network
Ngwa Ethernet na otu ha si arụ Ọrụ
Ngwongwo Ntanetị Ọdịdị Na-agbapụ Ntanaka
Okwu Mmalite nke Technology Technology (IT)
Ntanetị netwọk maka Intanet Ịntanetị (Television)
Esi tinye Setcode na iPhone na iPod Touch
Na Pirate Bay: Gịnị Ka Ọ Bụ?
Kedu ihe bụ FireWire?
Otu Smart Smartbags chekwaara ndụ
Kedu ihe bụ EPC File?
The Best Idle Clickers maka gam akporo
Ntụle ederede SMS1 Ọkà okwu
Otu esi eme Nwelite Wụnye nke OS X Mavericks
Usoro Google Docs Online Word Processing Software
Nbudata Ntaneti efu na Vimeo
Ihe ị ga-eme Mgbe iPhone Email gị adịghị arụ ọrụ
Mgbe Onye nbipute $ 150 nwere ike ịzụta gị ọtụtụ puku
Ijikwa TWC DVR si n'ebe ọ bụla
Na-agbakwụnye Images gaa na ibe weebụ gị
Nyefee Ntaneti Site na Digital na DVD Recorder
Ezigbo Earbuds 9 kacha mma ịzụta na 2018
Esi esi Jikwaa Mpempe akwụkwọ APFS
Nnukwu Nchekwa Izu: Mmegharị City Ndị aghụghọ maka Xbox
Okpokoro nke etiti Midnight Episode 1: Tom's Mac Software Pick
Ndi Ogugu ndi ocha bu ndi iro ojoo n'ezie?
Atụmatụ Enyemaka Iji Mee Ka okporo ụzọ azụmahịa gị mụbaa
10 Ihe eji eme ihe maka mgbasa ozi na ntanetị